Turkiga awooddiisa ciidan wax ka ogow! - Bulsho News
'Da' yar': Maxay tahay 'da' yaraan' sideyse u saameyneysaa jiilka...
8 Juunyo 2020
Waa la cusbooneysiiyay 16 Sebtembar 2021
Xigashada Sawirka, RT
Saameynta militeri ee dalka Turkiga ayaa sanadihii dambe aad loo dareemay, waxaan ugu dambeeyay ciidamada Turkiga uu u diray dalka Libya iyo kuwii kasii horeeyay ee hawlgalka ku fuliyay waqooyiga dalka Suuriya.
Sidoo kale, ururka Taliban oo bil ka hor la wareegay maamulka Afghanistan, dhowaanna soo dhistay dowlad ku meel gaar ah ayaa garab weydiisanaya Turkiga.
Taliban waxay isku deyayaan in caalamka uusan go’doominin, waxayna illaa iyo hadda isku deyayaan in Shiinaha iyo Turkiga ay ka helaan xiriir wanaagsan, iyo in garoonka Kaabul loo maamulo.
Haddaba heerkey gaarsiisan tahay awoodda ciidan ee Turkiga?
Diyaaradaha xamuulka ee Turkiga
Xigashada Sawirka, Turkey Navy
Ciidanka badda ee Turkiga
Fiqi oo shaaciyey in arrin uu sameeyey Odowaa...
Farmaajo oo u hambalyeeyay Abi Ahmed
Maxay ahayd cilladii xalay ku timid shirkadaha Facebook,...
Xog: Xoogagga Ahlu Sunna oo gacanta ku dhigay...
Ciidamada Ethiopia oo mar kale duqeeyey caasimadda Tigray